सेप्टेम्बरमा चीन कस्तो छ | Absolut यात्रा
हामीलाई त्यो पहिले नै थाहा छ गर्मी मा चीन एक भट्टी छ, जबसम्म तपाईं पहाडहरू वा तिब्बती मैदानहरूमा जानुहुन्न। अन्यथा, यदि तपाईं धेरै पर्यटन शहरहरूमा जानुहुन्छ भने, धेरै तातो र आर्द्रता अनुभव गर्न तयार गर्नुहोस्। तर चीन कसरी सेप्टेम्बरमा छ?, जुन लगभग शरद ?तुमा हो?
यो देश को स्थान मा निर्भर गर्दछ, तर उत्तर तिर सामान्य रेखामा तातो कम गर्न थाल्छ र दक्षिणमा तातो तापक्रम कायम रहन्छ। सेप्टेम्बर सुक्खा महीना हो मिडसमरको भन्दा र यो चिसो भए पनि त्यहाँ अझै आर्द्रता छ। गर्मीको बिदा समाप्त भएको छ त्यसैले त्यहाँ आन्तरिक पर्यटन कम छ र उहि समयमा गर्मीको छाया अझै पनि हावामा छ।
त्यो हिसाब गर्नुहोस् बेइजि inमा औसत तापमान २ 25, २ 26 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ श 13्घीयमा यो २ C वा २º डिग्री सेल्सियस बढी हुन सक्दछ, २० सेन्टिग्रेड झारपात हुन्छ भने गुइलिनमा अझै तातो छ। म भन्छु कि तपाईंले सोच्नु पर्छ यो एक हल्का ग्रीष्म ,तु हो, तर अन्तमा गर्मी।
तर सेप्टेम्बरमा चीनको कुन नकारात्मक बिन्दु छ? ठीक छ, देशको मध्य र दक्षिणमा आन्दोलनको अन्त्य हो त्यसो भए यो अझै धेरै वर्षा गर्न सक्छ। त्यहाँ एक महत्त्वपूर्ण छुट्टी पनि छ, अक्टुबर १, र हामी पहिले नै जान्दछौं कि जब यो छुट्टी हो लाखौं चिनियाँ यात्रा र सबै यातायातका साधनहरू लिन। यस छुट, म भन्छु सेप्टेम्बर महान छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » सेप्टेम्बरमा चीन कस्तो छ?